बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रु. ३.०५ अर्ब लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक Bizshala -
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रु. ३.०५ अर्ब लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकको उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकम मुद्दति निक्षेपका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको हो। जसअन्तर्गत बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्समा १५ कोड २५ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा राख्नेछ।
मुद्दति निक्षेपका रुपमा राख्न चाहने रकम खोली राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पेस गर्न राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको छ। यसका लागि मंसिर २१ गते दिउँसो ४ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
यस्तो लगानी आउँदो पुस १ गतेदेखि २०७९ मंसिर २९ गतेसम्म ३६५ दिनका लागि हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
मंसिरसम्म कुन–कुन शीर्षकमा कतिले पाए सहुलियतपूर्ण कर्जा ?
काठमाण्डौ । मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय स�...
बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन १४ अर्बले घट्यो, सीडी रेसियोको
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप एकैदिन १४ अर्ब...
राष्ट्र बैंकद्वारा ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८’ जारी,
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन,...
बैंकहरुको निक्षेप एकैदिन रु. ४९ अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानी कति ?
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप एकैदिन ४९ अर्ब...
राष्ट्र बैंकले आजबाट ल्यायो रु. २ को नयाँ सिक्का प्रचलनमा,
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज पुस ३० गतेबाट रु. २ को नयाँ...
महँगी ह्वात्तै बढ्यो, रेमिट्यान्स घट्यो
काठमाण्डौ । मुलुकमा महँगी ह्वात्तै बढेको देखिएको छ। नेपाल...
बैंकहरुलाई २० वर्षसम्म बुझिलिन नआएका निक्षेप ‘बैंकिङ विकास
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्षसम्म बुझिलिन नआएका निक्षेप...
काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिने क्रम जारी रहेको...